क्यानाडा हाउस ओफ कमन्स प्रश्न अवधि
यो दैनिक 45-मिनेट क्यू ए एले प्रधान मंत्री र अरूलाई हट सीटमा राख्छ
क्यानाडा मा, प्रश्न अवधि दैनिक 45 मिनेट को अवधि को हाउस ओन कमन्स मा छ । यस अवधिले संसदका सदस्यहरूलाई प्रधान मंत्रीको रूपमा अनुमति दिन्छ, क्याबिनेट र कमेन्ट कमेन्ट कमेन्टले नीति, निर्णय, र कानूनको बारेमा प्रश्न सोधेर जिम्मेवार बनाउँछ।
के प्रश्नको बेला के हुन्छ?
संसदको विपक्षी सदस्य र कहिलेकाहीँ संसदका अन्य सदस्यहरू प्रधान मंत्री, क्याबिनेट महासचिव र कमेन्ट कमेन्ट हाउसको अध्यक्षतामा प्रश्नहरू सोध्छन् र उनीहरूको जिम्मेवारीको लागि उनीहरूको नीति र विभाग र एजेन्सीहरूको कार्यलाई रक्षा र व्याख्या गर्न कुर्सिन्छन्।
प्रांतीय र क्षेत्रीय विधान सभाहरूसँग समान प्रश्न अवधि छ।
प्रश्नहरू बिना जानकारी बिना मौलिक प्रश्न सोध्न सकिन्छ वा नोटिस पछि लेख्न सकिन्छ। सदस्यहरूले उत्तरमा सन्तुष्ट भएनन् भने उनीहरूले सजायको कार्यवाहीको समयमा अधिक लम्बाईमा मुद्दा पछ्याउन सक्छन् जुन शुक्रबार बाहेक हरेक दिन हुन्छ।
कुनै पनि सदस्यले प्रश्न सोध्न सक्छ, तर समय समयमा विपक्षी दलों को लागि विशेष गरी सरकारको सामना गर्न को लागी निर्धारित गरिएको छ र यसको कार्यका लागि उत्तरदायी छ। विपक्षीहरूले सामान्यतया सरकारको कथित अपर्याप्ततालाई उजागर गर्न यो समय प्रयोग गर्दछ।
कमेन्ट हाउस को अध्यक्ष प्रश्न अवधि को निरीक्षण गर्दछ र आदेश को बाहिर प्रश्नहरु लाई शासन गर्न सक्छ।
प्रश्न अवधि को उद्देश्य
प्रश्न अवधिले राष्ट्रिय राजनैतिक जीवनको चिन्तालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ र संसदका सदस्य, प्रेस र जनताको नजिकको नजिक छ। प्रश्न अवधि क्यानाडा हाउस ओफ कमन्स शेड्यूल को सबै देखि अधिक दृश्य भाग हो र व्यापक मीडिया कवरेज हुन्छ।
प्रश्न अवधि टेलिभिजन गरिएको छ र यो संसदीय दिनको त्यो भाग हो जहाँ सरकार यसको प्रशासनिक नीतिहरु र यसको मन्त्रीहरूको आचरणको लागि व्यक्तिगत रूपमा सामूहिक र सामूहिक रूपमा जिम्मेदार छ। प्रश्न अवधि संसदका सदस्यहरूको लागि निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधि र सरकारी निगरानीका रूपमा भूमिकाको प्रयोग गर्न एक प्रमुख उपकरण हो।
यहाँ ठेगाना लेख्न सान्त्वना गर्न यकीन छ कि तपाई जवाफ दिनुहोस्
क्यानेडियन कन्फिडरेसन के थियो?
विन्निपेग जनरल स्ट्राइक 191 9
ल्याटिन कन्जेक्शनको सूची
सबै मकालु बारे: विश्वमा5औं भन्दा उच्च पर्वत
भाषणका चित्रहरू: परिभाषा र उदाहरण
अमेरिकी गृहयुद्ध: मेजर जनरल इरविन म्याकडेल
ध्वनिक गिटारमा स्ट्रिंगहरू परिवर्तन गर्दै
प्रभावकारी सङ्गीतकारहरू जसले जवानलाई जन्माए
Entropy उदाहरण समस्या परिवर्तन गर्नुहोस्
जस्टिन गेटिन: विवादास्पद स्प्रिन्ट स्टार
इस्लामिक पवित्र महिना, रमजान को बारे मा महत्वपूर्ण जानकारी
तपाईंको कार विस्तार गर्न सुखाने को पाना
स्टेन स्कोर र रिकोललिंग टेस्ट स्कोरमा उनीहरूको प्रयोग
10 सबैभन्दा प्रसिद्ध शेक्सपियर उद्धरण
वर्जीनिया वर्जीनिया जीपीए, एसएटी, र ACT डेटा
अभ्यास नोट्स: जागरूकता र शरीर
रासायनिक विश्लेषणमा मनका टेस्ट
एक प्रक्रिया विश्लेषण निबंध मूल्यांकन गर्दै: रेत कैसल कसरी गर्ने
होली को लागि शीर्ष 12 बलिउड गाने
फुटबलमा एक अनुहार - परिभाषा र व्याख्या
डिजिटल पियानो समीक्षा: यामाहा P85
गृहकार्य असाइनमेन्ट सम्झनका लागि सुझावहरू
टाइगर वुड्स नेट मूल्य के छ?
महान् अपेक्षाहरु उद्धरण
Longbranch Pennywhistle, ग्लेन फ्रि को पूर्व ईगल संगीत